Guridda ama duugoobay? Eeg haddii sheygaaga Apple uu ku jiro liistadan | Wararka IPhone
Guridda ama duugoobay? Eeg haddii sheygaaga Apple uu ku jiro liistadan
Wararka IPad | | iPad, Alaabada Apple
In kasta oo xaqiiqda ah in "guridda" ama "retro" ay aad mooddo, tiknoolajiyada gudaheeda maahan wax aad loo jecel yahay. Haa, waa run in qaar badan oo ka mid ah ay ku bixin doonaan qaddar lacag ah asalka iPhone-ka ee xaaladdiisu wanaagsan tahay, ama mid ka mid ah kuwa qaaliga ah ee iMac G3s, laakiin waxaa loogu talagalay kuwa jecel nooca noocan oo kale ah ee doonaya inay u qurxiyaan canaasiirta. Inteena ugu badan ayaa jecel in alaabtayada la cusbooneysiiyo oo aan sii wadno inaan sii wadno taageerada Apple haddii ay dhacdo burbur. Nasiib darrose taasi weligeed ma ahaan karto kiiska weligiis, iyo Apple waxay leedahay liis ay ku qoran yihiin aaladaha "Vintage and Obsolete" kuwa aan siinaynin wax taageero ah.
1 Guridda iyo duugoobay
2 Moodelladii ugu dambeeyay ee lagu dhawaaqay inay duugoobeen ama gurinayeen
3 Moodooyinka ku xiga ee lagu soo galo liiskan
Guridda iyo duugoobay
Maxay ku kala duwan yihiin guridda iyo duugga? Hagaag ugu yaraan Apple, Guridda waa aaladahaas oo u dhexeeya 5 iyo 7 sano jir ka dib marka wax soo saarku istaago. Qaar ka mid ah moodooyinka guridda waxay joogteeyaan taageerada Turkiga iyo Kaliforniya, sharciyada ka jira meelahaas awgood, laakiin kama ahan dalalka intiisa kale. Si kastaba ha noqotee, moodooyinkaas horay uga soo gudbay in ka badan 7 sano tan iyo markii ay joojiyeen soo saaristooda ayaa durba loo arkaa inay yihiin kuwo duugoobay, lagumana taageeri karo waddan kale oo adduunka ah. Haddii aad leedahay burburka, Apple ma sii dayactirayo ama ma siinayo qaybo.
Moodelladii ugu dambeeyay ee lagu dhawaaqay inay duugoobeen ama gurinayeen
Maxay yihiin moodooyinka ugu dambeeyay ee sharafta leh inay galaan qaybta guridda ama duugoobay? Sida buugaagta wax lagu qoro, bartamihii-2009 MacBook cad, dabayaaqadii-2008 MacBook Air, bartamihii-13 15-inch iyo 2009-inch MacBook Pro iyo horraantii 17 2009-inch, 20-inch iyo 24-inch iMac laga bilaabo hore 2009 iyo Mac Mini bilowgii 2009. Waqtigan xaadirka ah iPad-ka kuma jiro liiskan, laakiin haa waxaa jira iPhone, si sax ah qaabka asalka ah. Ma rabtaa inaad aragto liiska oo dhameystiran? Waad heshay bogga rasmiga ah ee Apple.
Moodooyinka ku xiga ee lagu soo galo liiskan
17-inch MacBook Pro bartamihii-2009 waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee sii wadi doona in loo tixgeliyo guridda, laakiin wixii ka sarreeya oo dhan IPhone 3G iyo 3GS ayaa taagan, taas oo yeelan doonta sharafkan shakiga leh June 9.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPad » Guridda ama duugoobay? Eeg haddii sheygaaga Apple uu ku jiro liistadan
Sida loo qasbo in app lagu xiro Apple Watch
Dungeon Hunter 5 wuxuu helayaa cusbooneysiin kooban oo weyn